Kuderedza uremu | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Nzira yekudzikisira uremu
Kuwedzera mapaundi idambudziko razvino iro rinobata vazhinji vepasi rose. Pane huwandu hukuru hwenzira dzakasiyana siyana dzaungaedza kubvisa dambudziko iri, riri pamusoro pavo iro richakurukurwa munyaya ino.
Kurera uremu haingori chitarisiko chakashata, asiwo mhedzisiro yakaipa yehutano hwese. Nehuremu hwakawandisa mumunhu, basa rekugaya chikafu, moyo, itsvo uye zvimwe nhengo dzemukati zvinogona kukanganisa.
Kune zviitiko zvinowanzoitika kana munhu akatanga hutano, nekufutisa, uye nekuda kweizvozvo chirwere chepiri kukura, izvo zvinotungamira mukuipa kunoshata.
Ndokusaka zvichikosha kwazvo kuomerera kune zvirevo zvehutano hwakakodzera uye hutano, pamwe nekutarisa uremu hwako uye hutano.
Nzira yekudzivirira sei kuoneka kwekuwedzera uremu?
Kuti urege kunetsekana nemakirogiramu akawedzerwa, zviri nani kuti urege "kuzviwana", uye nekuda kweizvi iwe unofanirwa kungoteedzera kune matipi mashoma nemirairo.
Kuti udzivise kutaridzika kwehuremu hwakawandisa hwaunoda:
cherechedza nheyo dzehutano hwakakodzera;
ipa muviri mvura yakakwana;
Usadya chikafu chinokuvadza;
Aya matipi ese ari nyore zvakakwana kuti vatevedze, nekuti iwo haadi kushanda kwakawanda, nguva uye kunyange mari shoma.
Kudya zvine hutano uye kuenda kumitambo, munhu haangochengetedze muviri wake zvakanaka, asi achawedzerawo hutano hwake uye hukama hwakanaka.
Nzira yekudzora uremu pasina kukuvadza kune hutano?
Kana, zvakadaro, paine matambudziko nehuremu hwakawandisa, saka nzira yehunyanzvi uye kushivirira zvichatodikanwa pano.
Chekutanga pane zvese, iwe uchafanirwa kurega chikafu chakakangwa, mishonga yekuchengetedza, chikafu chakareruka, zvinwiwa zve carbonated uye doro - izvi zvigadzirwa zvinokuvadza muviri.
Muviri unoda huwandu hwakaringana hwemvura - yakachena mvura, kwete kofi, majusi nezvimwe zvinwiwa, asi mvura yakanatswa.
Maitiro anofungidzirwa emazuva ese emvura pazuva marita matatu, asi zvese zvinoenderana nehuremu hwemunhu.
Kuti ubvise huremu hwakawandisa, haufanire kutevedza kudya kuneta, kufa nenzara uye kugara mumahoro emitambo kwemazuva.
Iwe unofanirwa chete kuomerera kune mamwe matipi akareruka ayo anozobatsira kwete chete kuderedza uremu, asi zvakare kuunza hutano nemuviri mune toni, kune izvi zvaunoda:
1. Kudya kwakakora. Mune yako yekudya kwevhiki iwe unofanirwa kusanganisira: miriwo nyowani uye michero (radha, bhanana, matomatisi, matango, pepper uye zvichingodaro), nyama yakabikwa, mazai, zvinonhuwira zvakasikwa, mukaka uye zvigadzirwa zvine mukaka-mukaka zvigadzirwa, zviyo, chikafu chegungwa, hove, mbatatisi uye magirazi .
2. Proportional chikafu. Kudya kunofanirwa kunge kuri muzvikamu zvidiki katatu pazuva, kudya kwakawandisa kunorambidzwa.
Kana kusanzwisisika kwenzara yakaitika pakati pekudya, iwe unogona kugadzira kadiki kadiki nekudya apuro, yakaderera-mafuta yogati kana bhanana.
3. Anoshanda mararamiro. Kuti uderedze uremu, iwe haudi chikafu chakasimba, asi mitambo inoshanda chinhu chakakosha chikamu chekushanda uye chakakodzera uremu.
Izvo hazvidikanwe kunyoresa kumitambo, ichave yakakwana kutora kufamba mupaki, kurovedza muviri usati warara uye mushure mekurara, pamwe chete ne squat uye kuita zvinhu zviri nyore zvemagetsi.
Semuenzaniso, kusundira-kumusoro kubva pasi, kurovedza muviri pane chakakomberedza bara nemabhara, kurovedza muviri pakubata zvemitambo bhora nekusvetuka tambo kwakakwana kuitira kuti ubvise mamwe mapaundi, uunze muviri, uye upe tsandanyama dzerunyararo uye chimiro.
Tevera kudya kwakasimba uye kufa nenzara kwete kungokoshesa chete, asiwo kune njodzi, nekuti izvi zvinowanzoendesa kumamiriro ezvinhu anosiririsa. Ndokusaka, iwe unofanirwa kusvika zvishoma nezvishoma uye nenzira kwayo nyaya yacho mukurwisa wakanyanya uremu.
Kuomerera kune kuraira kuri muchinyorwa chanhasi, munhu anogona nyore kubvisa mapaundi ekuwedzera, kuunza muviri wake kune toni, uye hutano hwake hudzokera kune zvakajairika.
Nzira yekukurumidza kukanganisa sei 10 kg kudarika?
chii chikafu chinopinda mumafuta mumawoko uye nzira yekubvisa mafuta mumaoko? Thanks pamberi
Buckwheat kudya, kwako ruzivo uye kuongorora? kupera uremu uye nguva yekudya?
mapiritsi ekuwedzera uremu. zvakawandisa mapiritsi anogona kutengwa paPurokiti?
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 0,367 masekondi.